6 tirtire xogta Android ugu wanaagsan ee lagu caawiyo in aad loo ilaaliyo xogta shakhsiga ah
Arrinta ah xogta u korayo mahad muhiim ay kor u kaceen tirada dambiilayaasha internetka in ay isku dubaridi xubno xogta muhiimka ah si ay u fuliyaan weeraro. Dabcan haddii aad raadinayso in ay iska iibiso casriga ah, ka dibna aad eegto in la masaxo macluumaad muhiim ah si ay u ilaaliyaan gaarka ah. Waxa kale oo laga yaabaa in aad dooneyso in aad tirtirto xogta shakhsiga ah xataa marka aad weli milkiilaha telefoonka. Hawsha ugu weyn oo keliya la tirtiro xogta ama sameeyo dib warshad default ah waa in qaar ka mid ah dadka smart isticmaali kartaa qaar ka mid ah software kabashada xogta si ay u helaan macluumaad la micno ah in aad fiican oo isticmaalaya codsiga tirtire xogta si aad u hesho tan waxan samaysay. In qoraalkan, waxaan fiirin doonaa halka 6 of tirtirayaasha ugu fiican in uu samayn doono sixir aad u.
Wondershare SafeEraser waa qalab weyn kaas oo awood kuu ay u tirtiri wax walba oo ku saabsan telefoonka Android ama kiniin. Wax walba waa recoverable duwan celinta goob warshad. Wondershare SafeEraser waa qalab ku haboon Android "masixi" Codsiga loogu talagalay in si joogto ah tirtiro dhammaan macluumaadka shakhsinimo oo ka qalab US isticmaalaya Creech Military-ka qoraal technology moodo xogta unrecoverable; soo laabtay qalabka si ah "Suuliyada nadiif ah" gobolka ka hor inta aadan iibin, deeqdo ama u ganacsadaan.
Waxay kaa caawin karaan inaad masixi dhammaan macluumaadka qalabka Android si buuxda oo aan dib u soo celinta.
Waxay bixisaa version ah tijaabo lacag la'aan ah.
Taageerada android 2.1 si ay Android 6.0.
User-friendly interface; tirtiro xogta gudahood saddex tallaabo.
Tani waa codsi kale oo kordhiyey tiro balaadhan oo ah muuqaalada dhan isku dhafan ee codsigan hal. Sida magacaba ka muuqata, app waxaa si fiican u yaqaan sida kaaliye android iyo macruufka mobile laakiin sidoo kale waa u qalantaa aqoonsiga ay awoodi karto in tirtiro algorithms xogta. Dhab ahaantii, app desktop waxa uu helay in ay muran la'aan mid ka mid ah kuwa ugu fiican marka ay timaado muuqaalada aasaasiga in design muhiimka ah ay. Mid ka mid ah dhinaca design ugu rafcaanka waa shaqeynayaan in xogta tirtiro labada dhufto ee android iyo macruufka ee Mac iyo Windows. Tani waa in ay tusinayaan in sida user ah, isagoo aalad waa in ka badan oo ay ku dhinteen in ka badan hal shimbir dhagax la tuuro hal.
Xogta tirtiro oo dhex algorithms iskaanka qoto dheer
Waxaa si fiican u la shaqaysaa dhammaan hababka file
Taageerada Mac iyo Windows
Tani waa codsi kale desktop qabow leh dano u hagaagsan phone buuxa iyo ammaanka siinaya dadka isticmaala lacagta caymiska ay xogta smart shaqeynta tirtiro. Si kastaba ha ahaatee, app wuxuu la iman doonaa version lacag la'aan ah siinaya fursad ay ku soo dejin iyo qiimeyn functionalities ammaanka iyo maamulka telefoonka lacag la'aanta ah ee aad. Marka la eego fudud, tani waa software ah oo higsanaya in uu siiyo ugu wanaagsan ee xal ammaanka xogta dadka isticmaala ay.
Waxa uu leeyahay interface user fiican
Waxaa fiican in muuqaalada maamulka phone
Waa yara pricy
Tani waa mid ka app weyn in macaashal fasalka bixinta hawlaha ammaanka si android dadka isticmaala telefoonka, waxaa weeye, app la ma aha oo kaliya loogu talagalay in lagu tirtiro xogta laakiin waxaa sidoo kale been abuur in la siiyo xal oodhan in barnaamijyadooda badan ma ay samayn. La hadal ah la socodka fog oo aad telefoonka dhex GPS, qoraalka SMS, rakibtay fog, SMS xiriir kuwo kale Web.
Waxay leedahay qaar ka mid ah sifooyinka ugu wanaagsan ee la-dagaallanka xatooyada
Waxaa gubtay awood batari low
1 Tubada Eraser
Xaqiiqada ah in 1 Tubada Eraser ka mid ah tirtirayaasha xogta ugu wanaagsan ee android ma aha in la yaabka lahaa awoodda qalabayn tirtiro xogta mahad. Waxa ugu fiican oo la app waa in mid ka mid ah waxa ay keeni kartaa in ay u tirtiri soo baxay xogta telefoonka ku salaysan qaar ka mid ah shuruudaha iyo koobin. Tusaale wanaagsan yahay haddii uu jiro taxane ah oo ka baaqsadey password ama isbedel ah ee aqoonsiga macmiilka. Ayaa dhinac kale positive waa xaqiiqda ah in uu yahay mid aad u raqiis ah-oo lacag la'aan ah version ad tagaa u dollar ah!
Waxa ay u ogolaataa nadiifinta Buuggan oo si toos ah
Waxay ku siinaysaa interface weyn si ay u maareeyaan content aad jeclaan lahayd in ay tirtirto
Waxaa tirtiri kartaa SMS xitaa qufulan
Sida ugu badan ee Chine ee liiskan, vipre app ammaanka mobile waxaa loo qorsheeyey inay tixgeliyaan xal ammaanka badan iyadoo ay isha ku hayaan xaqiiqada ah in ammaanka telefoonada kadhex jirta baaxadda balaadhan oo ah doorsoomayaasha. Iyadoo app this, aad si fudud u helida phone luntay oo meel fog laga tirtiro xogta sababo ammaan dartood. Xataa si fiican, waxaad awoodi doontaa inaad si ad-helo telefoonka iyo aad reserved karaa digniin si toos ah in la ahbaa haddii aad telefoon la xado. Waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho version oo lacag la'aan ah oo kaliya si aad u hesho dhadhan biyaha ka dibna aad ka iibsan kartaa nooca buuxda Haddii aad ku qanacsan la.
Waxay leedahay jeer scan gaaban
Waxay leedahay xamuulka ah muuqaalada
Waxaa si fiican u la shaqeysaa barnaamijyadooda kale ku rakiban
Waxaa ku baabbi'iyee karaa badan oo data
Dabcan, iyadoo tirada barnaamijyadooda ammaanka ee suuqa liiska yahay dhamaadka lahayn laakiin muran lix waa cut a kor ku xusan inta kale. Waxaa had iyo jeer waa muhiim in la ogaado waa in barnaamijyadooda la milmay la dhaqanka ammaanka hadii ay doonayaan inay si fiican u shaqeeyaan. Si kale haddii loo dhigo, waxaa lagu talinayaa in ay had iyo jeer ka walwalsan halista noocyada kale ee channels ammaanka xogta.
> Resource > masixi > 6 Best Android Data tirtirayaasha si ay u difaacdo xogta shakhsiga ah